MODA | Article Detail | nude color ကိုဘယ်လိုအရောင်လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြမလဲ?
nude color ကိုဘယ်လိုအရောင်လေးတွေနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ကြမလဲ?
မျက်လုံးအေးစေတဲ့ Nude Color Classic Outfit လေးတွေ
အရောင်လေးတွေအားလုံးကချစ်စရာကောင်းကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ရဲ့အသုံးအဆောင်အဝတ်အထည်တွေအနေနဲ့ဝတ်ဆင်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာတော့ အရောင်တွေကိုပါးနပ်စွာမတွဲစပ်နိုင်ရင်အဲဒီအရာကရုပ်ဆိုးစေမှာပါ။ အရောင်တွေအများကြီးထဲမှာမှ ဒီတစ်ခါပြောပြပေးချင်တာ nude color တွေအကြောင်းပါ။ အရောင်ရယ်လို့ပြောလို့မရလောက်အောင်ဖျော့တော့နေတဲ့အရောင်လေးတွေကိုဖက်ရှင်ကျကျဘယ်လိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်မလဲဆိုတာကအဓိကကျတဲ့အချက်ပါ။
Nude color ဆိုတာ skin color tone အဖြုနဲ့အသားရောင်ရောထားတွေကိုရည်ညွှန်းတာမို့အဲလိုအရောင်ကို outfit အနေနဲ့ဝတ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါအရောင်ဖျော့ဖျော့လေးကြောင့်ကိုယ့်အသွင်အပြင်ပါ မှိန်သွားမလား ပေါ်ပါ့မလားဆိုပြီး ခေါင်းမရှုပ်ရအောင် ဘယ်လိုတွဲဖက်ဝတ်ဆင်သင့်လည်းပြောပြပေးမယ်နော်။ အများစုဆယ်ကျော်သက်တွေကတော့ဒီလို nude color ကိုသိပ်ကြိုက်လေ့မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေကအရောင်လွင်လွင်လေးတွေကြိုက်တတ်ကြတာမို့ အခုပြောပြပေးမယ့် nude colorလေးက over 20 တွေအကြိုက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Nude color ကိုဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရောင်တွေနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ Color wheel ရဲ့ complementary color နဲ့တွဲဖက်ဝတ်နိုင်သလို သင့်ဆံပင်အရောင် ဒါမှမဟုတ်မျက်လုံးအရောင်တွေနဲ့ တူတဲ့အရောင်ကိုလည်းရွေးချယ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးသင့်အသားအရေကိုပိုလင်းစေမယ့် လိမ္မော် ၊ အနီ၊ ခရမ်း ၊ပန်းရောင်တို့နဲ့လည်းတွဲဖက်နိုင်သလို သင်ဆိုးမယ့်နှုတ်ခမ်းနီအရောင်နဲ့တူတဲ့ top ကိုလည်း nude color နဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
သင်စိတ်သဘောကျတွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ nude color လို့ခေါ်တဲ့ earth color ဆိုတာမျက်လုံးအေးစေတဲ့အရောင်ဖြစ်ပြီးအမဲရောင်ရဲ့လိုက်ဖက်မှုကဲ့သို့အရောင်တော်တော်များများနဲ့လိုက်ဖက်စေမှာပါ။ Navy & nude လို့ဆိုကြသလိုအပြာရင့်ရောင်၊
ကြက်သွေးရောင်၊ အမဲရောင်၊ အဖြူရောင်တို့နဲ့အများအားဖြင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ ရင့်ကျက်စပြုသူလေးတွေ သဘောကျရွေးချယ်တတ်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပြီး အမြင်အေးစေတဲ့အပြင် classic ဖြစ်တဲ့အရောင်လေးမို့ ရွေးချယ်ဝတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ဖို့စဉ်းစားရခက်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းသိသင့်တာလေးတွေသိရပြီမို့ nude color လေးနဲ့ classic outfit လေးတွေဝတ်ပြီးလှနိုင်ကြပါစေနော်။